Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry 8220 Pearl Flip — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli nezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry‎ → ‎
Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry 8220 Pearl Flip
Amacala, futhi Russian keyboard izingxenye BlackBerry Pearl Flip
Model 8220 uhlukile. Lona nguMuntu kuphela smartphone BlackBerry efomini-factor "clamshell" (kukhona model 9670, kodwa akusiyo iyahambisana amanethiwekhi Russian).
Russian keyboard, amacala, amashaja kubakaki, earphone kanye nezinye izesekeli izingxenye ezisele for BlackBerry 8220 — thola konke lapha, ne izincazelo umkhiqizo ngamunye, nezithombe. Wonke umuntu uyokwazi ukukhetha ncamashi abakufunayo!
Izesekeli sincoma kubo bonke abanikazi BlackBerry 8220 stylish Pearl Flip: ikhibhodi Russian kube lula input for somphako ukuvikelwa smartphone, futhi ishaja umnikazi imoto (car abanikazi).
ledivayisi-factor kwenza nobunzima ezithile eziphusile disassembly nokulungisa. Nakuba ukhululekile ukuba athenge ezihlukahlukene izingxenye kanye izingxenye iyokhandwa BlackBerry 8220, sincoma ukuthi uxhumane inkonzo yethu sesevisi: Balungise Flip Pearl BlackBerry . Futhi uma udinga ukudlulisela oxhumana nabo smartphone, ubuyekeze uhlelo lokusebenza, ukufaka izicelo noma ukumisa imeyili — bafune ukuba bamise amasevisi BlackBerry !
Categories of page Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry 8220 Pearl Flip
Stereo earphone we 3.5mm Stereo earphone ngoba BlackBerry (ikhophi)
izinga Sound kuphezulu, ukubukeka kuyinto izakhamuzi zaseBosnia zifana kakhulu kulokho eqale iyikho.
Ishaja yangempela yodonga ekhuphukile yamanje ye-2000mA
Ishaja ephathekayo ye-QC10UK (QC13UK) ine-2A yamanje futhi ikuvumela ukuthi ukhokhise amadivayisi wesimanje ngokushesha.
I original ILUNGU LEPHALAMENDE-2100 Portable Mobile Power Ishaja ye BlackBerry
Kulula kakhulu ukusebenzisa format nge ikhebula esakhelwe ngaphakathi! Maximum olunembile icala Inkomba. design Stylish, ukhwaliti original. isisindo Compactness futhi abekiwe umthamo high. nesisekeli esidingekayo kubantu matasa.
I-Gen Gen Mono Headset ye-3.5mm ye-Original Mono Headset ye-BlackBerry
I-version ethuthukisiwe ye-classic mono headset nge-ergonomics esezingeni eliphezulu nokucaciswa kobuchwepheshe. Ukuklama nekhwalithi yeBlackBerry.
I-Original Universal Wall Charger MicroUSB Bundle
Kufaka phakathi ishaja, idatha nekhebuli yokushaja, nezinamathiselo zezitolo ezahlukahlukene. Idivayisi ikhiqiza i-500 mA yamanje.
Ishaja yangempela ye-AC enesixhumi seMicroUSB
Indlela yakudala yeshaja izokuvumela ukuthi ukhokhise ifoni yakho lapho uphuma khona: ekhaya, ezweni, ehhovisi. Intambo ende, 700-750 mA yamanje (5V) yamanje.
Ishaja yemoto yangempela enesixhumanisi se-MicroUSB
Ifanele amadivayisi anesixhumi se-MicroUSB. Ikhiqizwa yi-RIM BlackBerry.
Ring trackball for BlackBerry
Ngokufaka indandatho entsha trackball, wena ubuyele BlackBerry yakho ukubukeka nasici, ngisho nasezintweni ezincane kakhulu kulencane! izingxenye ezisele Original.
Zangaphakathi nezangaphandle LCD izikrini kwenhlangano ukuze BlackBerry 8220 / 8230 Pearl Flip
Kulesi imodeli kukhona ekhombisa ezimbili BlackBerry: oyinhloko (kwangaphakathi) nokwesibili (yangaphandle) futhi kokubili ababuthelwa ibe ingxenye eyodwa.
I original ikhibhodi isiZulu BlackBerry 8220 Pearl Flip
Ingxenye yomzimba, elele close to the support for the ukuqaliswa ukuchofoza izinkinobho. izingxenye Original esikhululekile, ukukhiqizwa BlackBerry: wokuqinisekisa ikhwalithi.
ikhibhodi chip for BlackBerry 8220 Pearl Flip
On-chip ikhamera kahle inkinobho amandla, volume up and down, nezinye izinkinobho "hot".
Isembozo Esingemuva for BlackBerry 8220 Pearl Flip (ikhophi)
ikhophi eliphezulu ikhava yebhethri — option omkhulu ukuze uvuselele ukubukeka smarftona at izindleko sakugcina.
Color trackball for BlackBerry
New trackball Akukona nje kuphela uzobuya smartphone yakho control lula futhi enembile, kodwa futhi ukuhlobisa accent yakhe bright! Khetha umbala wakho :)
I original trackball for BlackBerry
Faka trackball entsha, wena ubuyele idivaysi malula futsi ngokunemba wayo ukulawula. Quality BlackBerry.
Power Isixhumi (ibhethri) T4 for BlackBerry
Izixhumi, okuyinto ixhunywe ngamandla ibattery.
trackball oxhumana inkinobho for BlackBerry
Obespechiaet ngokucindezela trackball nokudlulisa control element of signal. izingxenye ezisele Original.
inkinobho trackball ukuze BlackBerry
It yenza umsebenzi ngokucindezela trackball. izingxenye ezisele Original.
jack Audio (earphone Jack) T6 for BlackBerry
Audio Isixhumi T6 uhlobo BlackBerry for ezinye tinkhulumo. Ixhuma earphone 3.5mm- kanye namanye amadivayisi abezindaba.
Media USomlomo (Isikhulisazwi) T6 for BlackBerry
Udlala ukuncenceza nezinye umsindo oqhamuka. I original eliphezulu spare.
izwi USomlomo (isipikha) T5 for BlackBerry
Udlala izwi interlocutor yakho ngesikhathi ingxoxo. I original eliphezulu spare.
T14 Ikhamera BlackBerry 8220
Ikhamera BlackBerry 8220 / 8230. izingxenye ezisele Original.
I-microphone (Microphone) T1 for BlackBerry
Uphendula ngezwi yokudlulisela kuya komunye party, ngoba eziningi BlackBerry tinkhulumo. izingxenye ezisele Original.
USB-isixhumi (seshaja) T1 for BlackBerry
Lona Isixhumi original seshaja USB-ikhebula, efanelekayo BlackBerry onobuhle ezithile.
Vibration motor (isidlidlizi Motor) T2 for BlackBerry
It nokobana umsebenzi isixwayisi sokudlikiza on Smartphones BlackBerry, iyahambisana cishe zonke izinhlobo.
Isixhumi SIM khadi (-SIM khadi Isixhumi) T10 for BlackBerry
-SIM khadi izixhumi T10 uhlobo BlackBerry, inikeza uxhumano kwiSIM khadi ye-GSM.
amakhadi Chip SIM (SIM), imemori khadi, e-Bluetooth BlackBerry 8220 Pearl Flip
Izixhumi zeSIM khadi, imemori khadi Bluetooth chip igibele okukodwa. I original ingxenye smartphone, ezifana efakwe kule inhlangano.
amakhadi Chip SIM (SIM), imemori khadi, inhlangano Bluetooth kusukela trackball kuya BlackBerry 8220 Pearl Flip
Izixhumi zeSIM khadi nememori khadi, trackball futhi Bluetooth chip igibele okukodwa. I original ingxenye smartphone, ezifana efakwe kule inhlangano.
Chip umbadlana (Main Cable) for BlackBerry 8220 Pearl Flip
Ukuhlanganisa le chip smartphone. izingxenye Original esikhululekile, BlackBerry production.
inzwa IC, LED kanye Isikhulumi BlackBerry 8220 Pearl Flip